आजको सबै परिवर्तन जनयुद्धबाटै सम्भव भएको हो : प्रचण्ड (विशेष अन्तर्वार्ता) – Lokpati.com
नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री सरकार पक्राउ प्रचण्ड राशिफल चितवन अमेरिका मृत्यु नेकपा केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस अपराध
दश वर्षे लामो जनयुद्धको सुरुवात आजकै दिन २५ वर्ष अगाडि गरिएको थियो । जनयुद्धलाई आज आएर स्मरण गर्दा कसरी हेर्न सकिन्छ ? जनयुद्धका कति लक्ष्य पुरा भए, भएनन् भनेर विश्लेषणात्क रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका अध्यक्ष तथा तत्कालिन जनआन्दोलनको सुरुवातकर्ता पुष्पकमल दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
जनयुद्ध’सुरु भएको २५ वर्ष वितेको छ । तपाईंकै नेतृत्वमा सुरु भएको जनयुद्धलाई अहिले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
मोटो हिसाबले भन्दा दुईवटा पहाड स् सामन्तवादको पहाड र साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउने कुरा थियो । सामन्तवादको पहाड मूलभूत रूपमा पन्छाइयो । अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको या साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउन बाँकी छ भनेर हेर्नुभयो भने ५०, ५० भन्न पनि सकिन्छ ।
मोटो हिसाबले भन्दा दुईवटा पहाड सामन्तवादको पहाड र साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउने कुरा थियो । सामन्तवादको पहाड मूलभूत रूपमा पन्छाइयो । अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको या साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउन बाँकी छ भनेर हेर्नुभयो भने ५०,५० भन्न पनि सकिन्छ ।
नेपालमा दस वर्ष जनयुद्ध भयो ।तरछोटो समयमै शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएकाले वा जनयुद्ध सम्झौतामा टुङग्याइएकाले त्यसबेला लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ण हुन पो नसकेका हुन् किरुकस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने लाग्छ । एकथरी मानिसहरुलाई लाग्छ कि अलि छिट्टै जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्ने काम भयो । जनयुद्धलाई केही वर्ष अरू चलाउन सकेको भए सामन्तवाद साम्राज्यवादविरुद्ध अझ ठूलै उपलब्धि हुने निर्णायक खालको विजय प्राप्त हुन्थ्यो कि रु भनेर तर्क गर्ने मानिसहरु छन् । त्यो एउटा मत छ । तर मेरो दृष्टिमा त्यो मनोगत छ र त्यो गलत छ ।
जनयुद्धलाईकेही वर्ष अरू चलाउन सकेको भए सामन्तवाद साम्राज्यवादविरुद्ध अझ ठूलै उपलब्धि निर्णायक खालको विजय प्राप्त हुन्थ्यो किरुभनेर तर्क गर्ने मानिसहरु छन् । त्यो एउटा मत छ । तर मेरो दृष्टिमा त्यो मनोगत छ र त्यो गलत छ ।
हामी कम्युनिस्ट वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने मार्क्सवादीहरु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन यी सबैलाई हेरेर अघिपछि गर्न सकिएन भने ठूलो चिज लिन्छौँ भन्दा सबै चीज गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसकारण हामीले लेनिनले भनेजस्तो ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर कतिबेला अघि बढ्नुपर्ने हो, कतिबेला पछि हट्नुपर्ने हो भन्ने जानिएन भने भोग्नुपर्ने परिणाम समकालीन संसार हेर्दा पनि धेरै थाहा पाउन सकिन्छ । हामीले हेर्दाहेर्दै पेरुको क्रान्ति क्षतविक्षत भयो । पूरै जित्छु भन्दा केही पनि रहेन । अहिले साइनिङपाथको नाम कसैले पनि लिँदैनन् त्यहाँ । करिब करिब गोन्जालो जेलमै सिद्धिइने स्थिति भइ नै सक्यो । श्रीलङ्काको तमिलहरुको विद्रोह कहाँ पुगेको थियो, के भयो रु भारतमै हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भइरहेको छ रु फिलिपिन्सको कहाँ पुगेर अल्झियो रु टर्कीमा पनि के थियो के भयो रु अरू देशका पनि माओवादी आन्दोलनहरु उपलब्धिहीन ढङ्गले कसरी क्षतविक्षत भए भन्ने कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंहरुले सुरु गरेको जनयुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थियोकस्तो परेको थियोरु बताउन मिल्ने जति बताइदिनुहोस् न !
किनभने योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर, आफ्नो शक्ति ल्याएर माओवादीसँग लड्ने तयारीमा लागेको मैले थाहा पाइसकेको थिएँ । हतियार आएको कुरा त तपाईं हामी सबैले देखेकै कुरा भयो । इजरायलको कति हतियार आयो रु बेल्जियमबाट कसरी हतियार आए रु अमेरिकन सेनाले रेन्जर बटालियन कसरी बनाउँदै थियो यो कुरा त सबैले नाङ्गै आँखाले पनि देखेको कुरा हो । तर मैले त्योभन्दा अगाडि जाने भन्यो भने नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु आएर नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने परिस्थितिर जाने खतरा थियो । तपाईं हामीले अफगानिस्तान देखेका छौँ । इराक देखेका छौँ । सिरिया देखेका छौँ । पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धका कुरा त छोडौँ ।
जनयुद्धलाई यति छिटो शान्ति प्रक्रियार राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनेहरुको मत थोरै मात्र छ । तर पनि त्यही सानो मत बढ्दैगयो भने नेपालको राजनीतिलाई उत्तिकै खतरा होला नि१ त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान गएको छ तपाईंको ?
मेरो चिन्ताभन्दा पनि देखिएकोघटनाक्रमहरुभन्दैछु । तपाईंहरुसँगै जनयुद्ध लडेको एक विप्लव समूह क्रान्तिअधुरो भयो भनेर हतियार नै उठाएको अवस्था छ ।तपाईंकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले उसलाई आतंकवादीजस्तैको व्यवहार गरिरहेको छ ।अहिले देखिएको यो सानो झिल्को बढ्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
विद्रोह भने पनि क्रान्ति जे भने पनि त्यसको नेतृत्व तपाईंले गर्नुभयो । विद्रोहका लागि जोस भर्नुभयो । अहिले कतिपय नेताहरु भिन्नै समूहमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा कहीँकतै मेरै पो कमजोरी पो रहेछ कि भन्ने महसुस भएको छैन ?
बाबुरामजी अहिले मसँग हुनुहुन्न । बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पूरै नेपाली र दुनियाँले देखेको छ उहाँ कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने । म चाहन्छु कि बाबुराजीले फेरि पनि आफ्नो विद्वता यही आन्दोलनमा खर्चिनुपर्छ अन्त अन्त भौँतारिएर हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव पनि छ । उहाँले गरेको गल्तीको जिम्मा मैले किन लिने ?
विप्लवजीहरु । मैले भनेँ नि ! उहाँहरु आउनुपर्छ । वातावरण बनाउन हामी पनि सहयोग गर्छौं किनभने हामी उहाँहरुलाई माया गर्ने मान्छे नै हौँ । हामीलाई पराइ ठान्न पर्दैन । अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन जुनबेला २०५२ सालमा हामीले जनयुद्ध गरेका थियौँ ।
तपाईंले भन्ने पनि गर्नुभएको छ कि विप्लवलाई दोस्रो प्रचण्ड बन्नेआकाङ्क्षा राख्नुभयो !
आन्दोलनले प्रचण्ड पैदा गर्ने कुरा हो, फेरि प्रचण्डले व्यक्तिगत आन्दोलन गरेर पनि भएको होइन । आन्दोलनले प्रचण्ड बनाएको हो । त्यही आन्दोलनले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, समाजवादउन्मुखतिर ल्याइपुर्‍यायो । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, विप्लवजीले पनि गर्व गर्नुपर्छ । बाबुरामजी र किरणजीले पनि गर्व गर्नुपर्छ । र यसलाई सदृढ गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर विद्रोहको कुरा गर्दा परिस्थिति त हेर्नुपर्‍यो नि १
तर उहाँ ९विप्लव० समूहले भनेको कुरा सुन्दा पनि ठिकै जस्तो लाग्छ निरुजस्तो,समावेशी,समानुपातिक,गणतन्त्र यी सब देखाउने दाँत मात्र भए । व्यवहारमा खासैकार्यान्वयनभएनभन्ने पनि छ ?
२०४७ सालको संविधान पनि त विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो । तर तपाईंले नै त्यसविरुद्ध विद्रोह सुरु गर्नुभयो ?
उहाँहरुले जनयुद्ध गर्नुभयो भने म पनि उहाँहरुको पछि लाग्छु नि १ जनयुद्ध हुने भएको भए त म छोड्ने नै थिइनँ त । अब उहाँले जनयुद्ध गरेर देखाउनुस् न त १ त्यतिबेला हामीले युद्ध गर्दाको पछिल्लो अवस्था हेर्नुभयो भने लाखौँलाख मान्छेलाई उतारेर, सभा गरेर, हजारौँको सेना बनाएर हिँडेको स्थिति हो । त्यसो गर्नुस् न त, गर्नुभयो भने गर्नेलाई म नराम्रो भन्दिनँ । तर हुँदैन क्षति मात्रै हुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ ।
अघि तपाईंले राजनीतिक रूपान्तरण त भयो तर आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सवालमा चाहिँ हामीले सोचे जति–चाहे जति गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। गर्न नसक्नुको ठोस कारणहरु के हुन्रुत्यो गर्नका लागि केले तपाईंहरुलाई बाधित गर्‍यो ?
किन सकिएन ?
जनयुद्धले स्थापित गरेकाथुप्रै राम्रा मुद्दामध्ये एउटा चाहिँ पहिचानको मुद्दा थियोजसको श्रेय त्यसका नायकको रुपमा तपाईंलाई पनि जान्छ ।तरत्यो मुद्दा कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा तपाईंहरुकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा पनि पार्टी ह्विपको सुर्केनी लगाइदिएरपहिचानको मुद्दालाई‘सोफोकेट’ गरिदिनुभयो ।यो किन भयो ?
यो सोफोकेट अहिले भएको त होइन नि १ संविधान बनाउने बेलामै भइसकेको थियो । तपाईंहरुले ध्यान दिनु भएको रहेनछ ।
संविधान बनाउने बेलामा किन त्यस्तो भयोरुअलिकति व्याख्या गरिदिनुस् न ।
नत्र त संविधान बन्ने नै भएन । अझ बढी प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतिर देश जाने खतरा पैदा भयो । संविधान बनाउन सकेन भनेर दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भएपछि तुरुन्तै क्रान्ति र विद्रोह हुने भए त हुन्थ्यो, क्रान्ति र विद्रोह होइन कि प्रतिक्रान्ति र प्रतिविद्रोह होला भन्नेजस्तो स्थिति देखिएपछि हामीले ‘यो पटकलाई अरूसँग मिलेर जति प्राप्त गर्न सक्ने हो, त्यति मात्र लिन्छौँ’ भनेर लिन तयार भयौँ । हामीलाई त्यतिमात्र दिन तपाईंहरु तयार हुनुहोस् । अर्को पक्ष पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त मान्न तयार तर ताम्सालिङ, नेवा या लिम्बुवान–खम्बुवान भन्न तयार भएनन् । त्यस्तो गरी प्रदेश बनाउन पनि अर्को पक्ष तयार नहुने भयो । संघीयता भनेको आफैमा एउटा पहिचान हो । हाम्रो अगाडि सवाल के भयो त रु या त संविधान नबनाऔँ, जेजे हुन्छ, भनेर हिँड्नुपर्ने भयो । हिँड्यो भने के हुने भयो त रु त्यति सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त पनि स्थापित हुने भएन । त्यसपछि तुरुन्तै विद्रोह हुने स्थिति पनि छैन । स्थिति त प्रतिक्रान्ति हुने पो देखिन थाल्यो ।
तपाईंले भन्नुभएको कुरा तत्कालीन सन्दर्भको शक्ति सन्तुलनको आधारमात्योतय भयो,तरअहिलेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा पार्टी ह्विपको सट्टा विवेकको मत प्रयोग गर्न दिइएको भएके हुन्थ्यो निरु
–शक्ति सन्तुलन बदलिएकै छैन नि १ तपाईंले हेर्नुभयो भने शक्ति सन्तुलन अझ उल्टो बदलिएको छ ।
जनयुद्धका घाइते,बेपत्ता भएकाहरुको परिवारको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन ढिला भइरहेको छरुकसरीयोजना बनिरहेको छ ?
यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा टुङ्गो नलाउँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् भनेर तपाईंले पनि बेलाबखत भन्दै आउनु भएको छ,गतिविधि पनि त्यस्तो देखिँदै आएको छ । के कारणले यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन रोकेको छ ?
यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ ?
–अन्तर्राष्ट्रियमा पनि एउटै भन्नेखालको छैन । एकथरी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा हिस्सा यो छिटो टुङ्गियोस्, राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेरै चाहने देखिन्छ । एकथरी आईएनजीओरएनजीओहरु चलाउने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँग सम्बन्ध भएकाहरु चाहिँ यो कहिल्यै नटुङ्गियोस्, यो रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । एकथरी साथीहरु भन्ने गर्छन्, यो ‘इन्डस्ट्री’ हो । उद्योगबाट आइरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, यो सकियो भने त ‘इन्डस्ट्री’ बन्द हुन्छ । यसलाई उद्योग बनाउन चाहने एकथरी मान्छेचाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् । कहीँ न कहीँ निहुँ बनाएको छ, भाँडेको छ, बिगारिदिएको छ, टुङ्गिन नदिने पनि छन् ।
गतसाल नै हामीले उठाएको प्रश्न फेरि सोध्दैछुस्हिजो तत्कालीन सत्तासँग विद्रोह गरेर जनयुद्धमा सघाउन आएका विद्रोही सैनिकरप्रहरीहरु यतिखेर दण्डित भएका छन्,तपाईंहरु आफैँ सत्तामा भएको बेलामा उनीहरु जेलमा बसेका छन् । उनीहरुको क्रन्दन सुनिदिने,उनीहरुलाई न्यायगरिदिने कोही पनि भएनन् भन्ने कुरा पनि छ,यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?
तपाईंले जहिले पनि असम्भवजस्तै कुराको सुरुवात गर्नुहुन्छ,चाहे त्यो जनयुद्धको होस् या चाहे तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको कुरा होस् । यी कुरालाई त सम्भव गराउनु भयो,अब यसपछि के सोच्नु भएको छ ?
म पहिला ‘मसाल’को महामन्त्री भएँ । महामन्त्री भएको केही महिनाभित्रै ‘मसाल’ नै विघटन गरेँ । मैले विचरा त्यो ‘मसाल’लाई अन्याय गरेको त होइन नि १ तर त्यसलाई विघटन गरेर ‘एकता केन्द्र’ बनाएँ । ‘एकता केन्द्र’ पाँच वर्ष चलाएर फेरि त्यसलाई विघटन गरेर अर्को बनाउने । यो प्रक्रियाभित्र तपाईंले देख्नुभयो नि, पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता पनि झण्डै झण्डै असम्भवजस्तै देखिन्थ्यो । तर सम्भव भयो फेरि । नेपाली जनताले त्यसैलाई मन पराए । मैले जनयुद्ध सुरु गरेँ, सुरुमा यो ‘तीन महिना नि टिक्दैन, ६ महिना नि टिक्दैन’ भनिन्थ्यो । टिक्यो त १० वर्ष, जनताले त साथ दियो !
भनेपछि तपाईंआफ्ना ती कदमहरुलाई‘क्याल्कुलेटिभ मुभ’मान्नु हुन्छ ?
मेरो ‘क्याल्कुलेटिभ’ नै हो र मैले यो पछिल्लो विषय असम्भव देखे पनि यो उचित हो र ठीक छ भनेरै गरेको हो । नभन्दै जनताले ‘हाई–हाई’ गरे, ‘यो त एकदम राम्रो गर्‍यो’ भने नि त १
जनयुद्ध,गणतन्त्र हुँदै पार्टी एकता गर्नुभयो,पार्टी एकतापछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ छ अहिले ?
यहाँको विश्वास त त्यो रह्यो तर पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरुले नाम मात्र नेकपा रह्यो तर व्यवहार त्यसअनुसार भएन,निर्णयशैलीदेखि लिएर धेरै कुरा काँग्रेसभन्दा फरक देखिएन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्,महाधिवेशनका लागि अब एक वर्ष छ,एक वर्षमा यत्रो ठूलो रूपान्तरण होला भनेर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले कसरी विश्वास गर्ने ?
–ठीक ढङ्गले हामीले नीति, योजना, कार्यक्रम बनायौँ भने एक वर्ष होइन, ६–८ महिनामै यो पार्टी एकदमै राम्रो पार्टी बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । किन विश्वास छ त १ यो पार्टीमा नेताहरुको जो टिम छ, तपाईं साढे चार सय–पाँच सय, बाहिर अरू प्रदेशका भन्ने हो भने त हजारौँ नेताहरु छन् । ती सबैमध्ये मेरो दृष्टिमा ९० प्रतिशत चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्धको लडाइँमा खारिएका नेता–कार्यकर्ता नै छन् । लाखौँ छन् देशभरि, तीमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा हिजो वर्ग सङ्घर्षमा, राजनीतिक सङ्घर्षमा हेलिएका, जेल–नेल, भूमिगत जीवन सबैखालका दुःख–कष्ट भोगेका मान्छेहरुकै बाहुल्य छ ।
केन्द्रीय कमिटीमै नेताहरुले उठाएका आवाजहरु,जस्तै सामूहिक निर्णयको कुरा,नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरुको सम्बोधन हुन्छन् । हामीले सम्बोधन गर्ने भनेको छौँ ।
व्यावहारिक रूपमै ?
धेरै चर्चामा आएको एमसीसी छ । यसबारे केन्द्रीय समितिमा धेरै छलफल भएर कार्यदल नै पनि बनाइसकेको अवस्था छ । तर यसबारे तपाईंको प्रष्ट धारणा आएन भन्ने पनि छ । के हो एमसीसीरुअब यो कसरी अगाडि बढ्छ ?
हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै साथीहरुबाट ‘के हो एमसीसी रु यसबारे हामीलाई राम्रोसँग बुझाउनपर्‍यो’ भन्ने प्रश्न नै आयो । त्यो कुरा बुझाउनका लागि र त्यसका क्लुहरु ठ्याक्कै केके हुन् भनेर नै हामीले पार्टी नेताहरुको एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । एमसीसीबारे गठित कार्यदलको रिपोर्ट अब आउँदैछ । त्यसो हुनाले त्यो रिपोर्ट आउनुअगावै पार्टी अध्यक्ष र कार्यदलको प्रस्तावक समेतकै नाताले पनि मैले अहिले बोल्नु उचित हुँदैन ।
दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि डेलिभरी दिन नसकेको जनताको गुनासो अझै सम्बोधन भएको छैन । तपाईंलाई के लाग्छ,जनताका आकाङ्क्षा यथार्थभन्दा धेरै अवास्तविक ढङ्गले चुलिएको हो वा साँच्चै नै सरकारकाले गति पक्रन नसकेको हो ?
विगतमा तपाईंले पटक पटक सरकारले डेलिभरी दिने कुरामा कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मानसिकता अथवा पुरानो मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रका कर्मचारीहरुले अवरोध गरिरहेका छन्,जसले गर्दा चाहेको डेलिभरी दिन नसकेको कुरा भन्दै आउनुभएको छ । तर त्यसैको प्रतिवादमा तिनलाई संरक्षण दिने काम पनि अहिलेको नेतृत्व प्रणालीले नै गरिरहेको छ भन्ने पनि आउँछ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छरु
यसको अर्थ मुलुकमा भएका सबै परिवर्तनहरु सम्झौतामै टुङ्गिएका कारण पनि पो त्यस्तो भएको हो कि ?
राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यस्ता कामचोर र प्रतिगमनलाई बोक्ने तथा नेतृत्वको वरिपरि घुम्नेहरुलाई नै बढी चेपिदिएको कारण पनि त यस्तो स्थिति आएको हो भनिन्छ नि १
नेकपामा कार्यविभाजन भएको छस्तपाईंले पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ,अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्ने र पार्टीको नेतृत्व गर्ने बीचको कुरा नमिलेर पो यो भइरहेको हो किरु
२०४८ सालतिर मैले तपाईंलाई फर्काउन चाहेँ । त्यतिखेर सामान्य बहुमत रहेको काँग्रेस सरकारले नवउदारवादको नीति ल्यायो र लागू गरिछाड्यो । तर अहिले करिब दुई तिहाइको बहुमतसहितको बलियो सरकार हुँदा पनि तपाईंहरुले किन आफ्ना प्रतिबद्धता अनुरूपका समाजवादोउन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर लागू गर्न सकिरहनुभएको छैनरु
हामीले त्यतातिर जोड कति पनि गरेका छैनौँ भन्ने होइन । सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कुराहरु, युवालाई स्वरोजगार, कृषि क्षेत्रमा गरिब किसानहरुलाई अगाडि ल्याउने कुराहरुमा हामीबाट प्रयासहरु भएका छन् तर पर्याप्त अझै छैनन्, अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । रातोपाटी डट कममा प्रकाशित छ ।
जनयुद्ध दिवसपुष्पकमल दाहाल